Qeybta:Ogaysiiska8 min akhris
Jawaabta McKnight ee Coronavirus
Halkan waxaad ka heli doontaa macluumaad iyo cusboonaysiin la xidhiidha jawaabta McKnight ee ku saabsan coronavirus / COVID-19. Waxaan sii wadaynaa inaan cusbooneysiinno boggan maadaama aan helnay warar la xiriira oo nala wadaago.
The McKnight Foundation, with more than 130 of our peer funders, recently signed an open letter ka Asian Americans/Pacific Islanders in Philanthropy (AAPIP) in response to increased xenophobia against Asian American communities due to COVID-19. We reject any attempts to stereotype or scapegoat Asian Americans. As the statement reads, “In this pandemic, it is abundantly clear that we are one people with a shared destiny.” United, we are all safer, stronger, and healthier. AAPIP has provided Foomkan for those who wish to sign the letter as an individual or on behalf of their organizations.
Medtronic Foundation iyo the U.S. Bank Foundation recently announced significant response funds. Medtronic Foundation announced $10 million—in addition to the $1.2 million committed by Medtronic and its foundation in February—to global relief efforts, which also include funding local health, economic, and food assistance for vulnerable populations. The U.S. Bank Foundation committed $30 million to immediate and long-term community relief efforts, which will support local and national nonprofits and implement a market impact fund to address unmet needs in local markets nationwide.
Maarso 23, 2020: Balanteenna, iyo Kheyraadka aan ka helno Wada-hawlgalayaashayada iyo Wada-hawlgalayaasha
Toddobaadkii hore, Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay ku biirtay maalgaliyeyaashayada facooda ah iyo hogaamiyaasha kale ee waaxda samofalka si ay u saxiixaan Golaha ballanqaadka waxqabadka ee ka jawaabaya COVID-19. Qoraalkan laga soo bilaabo, 227 urur ayaa saxeexay ballan-qaadyada ah inay siiyaan taageero degdeg ah deeq-bixiyeyaashayada iyo shuraakadayada. Tallaabooyinka waxaa ka mid ah: fududeynta ama baabi'inta xaddidaadaha deeqaha hadda jira, dib u dhigista shuruudaha warbixinnada iyo dalabaadka kale ee aan loo baahnayn waqtiga deeq-bixiyeyaasha, iyo ku-biirinta maalgalinta waxqabadka bulshada ee ku saleysan bulshada.
Intaa waxaa sii dheer, McKnight wuxuu ballanqaaday $100K illaa Sanduuqa Soo-kabashada Musiibada ee Minnesota maamusho Saint Paul iyo Minnesota Foundation. Maaliyaddeena ayaa loo qeybin doonaa Aasaasiyadeedka Minnesota waxaana loo adeegsan jiray taageeridda baahiyaha tooska ah ee shakhsiyaadka, qoysaska, iyo ganacsatada yaryar ee ay ugu wacan tahay saameynta coronavirus. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad nagu soo biirto. Shakhsiyaadka iyo hay'adaha samafalka labadaba way ku biirin karaan deeqdan waxayna gargaar degdeg ah siiyaan dadkaas iyo bulshooyinka sida xun wax u soo gaareen.
Waxaan ku faraxsanayn jawaabta ay bixiyeen qaar badan oo ka mid ah asxaabteena ku dhaqan waaxyada samafalka iyo samafalka, oo ay kujiraan shuraakada bulshada muddada dheer jirtay iyo sidoo kale maal galiyaasha asaasiga ah, kuwaas oo bilaabay ficil si loo caawiyo dadka deegaanka iyo ururada samafalka ah. Baro waxbadan oo kusaabsan dadaallada maxalliga ah iyo kuwa gobolka:
Headwaters Foundation Caddaaladda aasaasey Sanduuqa Koowaad ee Bulshada in la taageero shabakaddeeda asaasiga ah ee ururada deeq bixiyaasha ee ku baahsan gobolka Minnesota, oo ay hogaaminayaan dadka Madowga ah, Dadka asaliga ah, iyo dadka midabka leh, marka ay ugaarsadaan saameynta cudurka coronavirus ee ku saabsan bulshadooda.
Minneapolis Foundation ka faa iidaysan doona Hal Sanduuqa MPLS inay taageeraan waxqabadka bulshada ee masiibada. Sanduuqa waxaa loogu talagalay inuu noqdo mid wax-ku-ool ah oo jawaab-celin ah, hubinta in agabyada isla markiiba la heli karo si wax looga qabto arrimaha soo ifbaxaya.
Golaha Minnesota ee aasaaska iyo Saint Paul iyo Minnesota Foundation wuxuu bilaabay $4.4 milyan Sanduuqa Soo-kabashada Musiibada ee Minnesota, sida kor ku xusan, si loo bixiyo gargaar deg deg ah kuwa ay si weyn u saameeyeen coronavirus.
Aasaaska Waxqabadka Minnesota, lixda saldhig ee gobolka oo dhan oo ku yaal gobolka weyn ee Minnesota, ayaa wax ka qabanaya baahiyaha degdegga ah ee bulshooyinkooda, oo ay ku jiraan daryeelka carruurta, helitaanka cuntada iyo qodobbada, iyo taageerada mushaharka lumay iyo nabadgelyo-xumada.
Golaha Minnesota (MCN) ayaa abuuray a Liiska ordaya ilaha aan faaiido doonka ahayn, oo ay siisay MCN, xulafadeeda iyo la-hawlgalaasheeda, iyo hay'adaha dowladda. Intaa waxaa sii dheer, waa bixinaysa 20 boqolkiiba dhammaan qorshayaasha Zoom in ay yihiin ugu yaraan hal sano.
Propel waxay bixisaa kaalmo farsamo oo aan qiimo jaban kubixin faa'iido-doonka iyo la-tashiyo bilaash ah oo la xiriira maaliyadda, istiraatiijiyadda, iyo dowladnimada ka dib masiibada.
Otto Bremer Trust waxay aasaastay a $50 milyan sanduuqa gurmadka iyada oo loo sii marinayo shirkaddeeda 'Community Benefit Financial Company (CBFC)' si ay taageero maaliyadeed u siiso Minnesota, Wisconsin, North Dakota, iyo macaashka Montana iyo ururada kale ee bulshada oo ay saameyn ku yeelatay waxna ka qabatay masiibada.
Farshaxanka Farshaxanka ayaa ballaarisay tilmaamaha ay leedahay Sanduuqa Gargaarka Degdegga ah in lagu daro daqliga lumay coronavirus / COVID-19 oo ay aasaastay a bogga macluumaadka coronavirus farshaxan yahannada.
Waxaan ku faraxsanahay inaan leenahay hogaaminta ururadaan - oo ay weheliso hogaaminta howlwadeenada dowladeena, ganacsatada maxaliga ah, iyo saaxiibo kale oo aad u tiro badan - xitaa sida ay u maareeyaan saameynta masiibada ee wanaagsanaanta shaqaalahooda iyo howlaha gudaha. Hadana waa xusuus kale oo ah inaan dhammaanteen wada joogno arrimahan.
Maarso 19, 2020: Kordhinta otomatiga ah ee Warbixinta Deeqaha
Sababo la xiriira saameynta coronavirus, McKnight wuxuu hirgaliyay muddo seddex bilood ah oo dheeri ah oo lagu kordhinayo dhammaan warbixinnada jadwalka bixinta. Intaas waxaa sii dheer, inta lagu jiro xaaladdan aan horay loo arag, deeq bixiyayaashu waxay la hadli karaan xiriirkooda barnaamijka si ay u weydiistaan wax ka beddelka suurtagalka ah ee heshiisyada deeqdooda, sida ujeedka deeqda ama qaab dhismeedka waqtiga.
Maarso 18, 2020: Waraaq loogu talagalay Saaxiibadayada Caalamiga ah
Halkan waa warqad aan u dirnay deeq-bixiyeyaasha Barnaamijka Wada-shaqeynta Cilmi baarista Dalagyada iyo iskaashatada.
15-Mar-20, 2020: Xiritaanka Iskuullada Minnesota
Marka la eego xidhitaanka iskuulka iyo carqalada kale ee ka dhaceysa masiibada, waxaan uga mahadcelineynaa fahamkaaga in xubno badan oo ka tirsan shaqaalaha McKnight ay isku dheelitirayaan mas'uuliyadaha shaqsiyadeed iyo kuwa xirfadeedba intii aan awoodno, xitaa sidii aan uga go'an nahay sii wadidda hawlgallada.
Maarso 14, 2020: Jawaabta McKnight ee Novel Coronavirus
Sida aan u sii wadno kormeerka horumarka la xiriira noro-coronavirus, hay'adda McKnight Foundation waxay mudnaanta siineysaa wanaagga shaqaalaheenna, deeq-bixiyeyaashayada iyo shuraakadayada kale, iyo beesheena maxalliga ah iyo tan caalamiga ahba. Waxaa naga go'an inaan kaalinteenna ka qaadno sidii loo hakin lahaa faafitaanka fayraska. Faafida heerka baaxadda leh waxay u baahan tahay taxaddar badan, iyo sidoo kale nimco badan iyo naxariis.
Waa tan tan micnaha ay u leedahay McKnight:
Laga bilaabo Isniinta, Maarso 16, shaqaalaheenu waxay si dhow u shaqeyn doonaan illaa iyo Abriil 13. Hawlgallada ganacsiguna way sii socon doonaan. Xitaa maadaama aan u baahanahay inaan wax ka bedelno sida aan u shaqeyno shaqadeena, waxaa naga go'an inaan ka jawaabno deeq bixiyeyaasha iyo la-hawlgalayaasha kale waqti habboon. In kasta oo booqashada goobta iyo kulamada shaqsiyeedka la joojin doono, shaqaalaha ayaa noqon doona waxaa lagu heli karaa emayl iyo telefoonka oo kuu diyaarin kara fiidiyaha ama telefoonka.
Xafiisyadayadu way xiran yihiin xubnaha dadweynaha, waxaanan joojin doonnaa adeegsiga goobahayada kulan ee loogu talagalay dhammaan martida bannaanka. Waxaan ka qoomameyneynaa wixii dhibaato ama dhibaato ah ee ka dhaca meelahaan ururada ku haya boos celin.
Waxaan ka fiirsan doonaa saameynta coronavirus ku yeelaneyso horumarka uu ururkaagu ka gaarey heshiiskaaga deeq-lacageedka. Waxaan aqoonsannahay in masiibo ku soo food saartay caqabado badan oo loogu talagalay faa'iido-doonka, laga soo bilaabo dhacdooyinka la baajiyay illaa suuqa oo hoos u dhacay illaa cadaadiska sii wadista ganacsiga. Haddii coronavirus kaa horjoogsaday inaad horay ugu dhaqaaqdid shir ama isu imaad kale, ama aad gaabisay adeegyo ama qorsheyaal kale, fadlan ogsoonow inaan kugu taageerno go'aannada miyir-qabka ah ee isku dheeli tiraya welwelka caafimaadka iyo amniga bulshada. La xiriir sarkaalkaaga barnaamijka haddii aad u baahato wax ka beddelid suurtagal ah oo ku saabsan shuruudaha heshiiskaaga deeqdu.
Waxaan garab taaganahay deeq bixiyayaasheena iyo bulshadeena. Faafidaani waxay yeelan doontaa saameyn badan oo xagga bulshada iyo dhaqaalaha ah, oo qaarkood aan hadda bilaabayo inaan fahamno. Markii aan waxbadan baranno, dib ayaan u eegis ku sameyn doonaa xulashooyinkayada jawaabeed. Haddii aad hayso fikrado gaar ah, fadlan la xiriir xiriirikaaga aasaasiga ah ama farriin noo soo dir kormeeraha bogga Nala soo Xiriirka bogga.
Tani waa waxa aan ognahay ilaa maanta. Sida dadka oo dhami, waxaan sii wadi doonnaa kormeerka xaaladdan firfircoon oo aan ula jaan qaadi doonno si ku habboon.
Soo kicinta lama filaan ah ee masiibada ayaa si aad ah noo xusuusineysa waxaan aad u jecelnahay. McKnight, waxaan qiimeyneynaa daacadnimada sayniska iyo shaqada cilmi baarayaasha, saraakiisha caafimaadka dadweynaha, iyo jawaabayaasha caafimaadka. Waxaan qiimeyneynaa sinnaanta, anagoo ka fikirna in carqaladayada ay ku dhici doonaan bulshooyinka qaar si ka adag kuwa kale. Oo waxaan qiimeyneynaa ka mid noqoshada, taas oo micnaheedu yahay inaan diidno dadaal kasta oo aan ugu adeegsaneyno caqabadadan caafimaad ee bulshada si aan u beero qeybsi ama aan takoorno.
Waqtigani waa wakhti la isugu yimaado, in la aqoonsado isku xidhnaanshaha qotoda dheer, iyo is ixtiraamida midba midka kale. Waad ku mahadsantahay fahamkaaga, sida, wada jir ahaan waxaan u wadnaa xaaladdan aan horay loo arag.
By Na Eng April 2020